ထိပ် – အဆိုပါ Tailoress
ဒီဇင်ဘာ 20, 2017 | အထူးပြောစရာမရှိ | ခွေး, ထိပ်, tutorials
Images are available in the pattern download Step 1 လူအပေါင်းတို့သည်ပုံစံကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်. ပခုံးချုပ်ရိုးတလျှောက်နောက်ကျောနှင့်အတူရှေ့ညာဘက်ခြမ်းကို တင်.. pin နှင့်အရပ်ဌာန၌ချုပ်. ဤစီမံကိန်းတစ်လျှောက်လုံး zig-zag ချုပ်သို့မဟုတ်အခြားလမ်းပိုင်းချုပ်သုံးပါ. ဒါ့အပြင်တစ်ဦးကဘောဂျာစီစက်အပ်သုံးစွဲဖို့သေချာ. လှမ်း2Open […]
ဒီဇင်ဘာ 19, 2017 | အထူးပြောစရာမရှိ | ခွေး, ထိပ်, tutorials
Dogs ကိုကျူတိုရီရယ်အဘို့အ Jasra Tee
ဒီဇင်ဘာ 3, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | ခွေး, ထိပ်, tutorials